तूफान लोरेन्जो: विशेषताहरु, उत्पत्ति र जलवायु परिवर्तन | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 05/04/2021 10:57 | तूफान
El तूफान लोरेन्जो सेप्टेम्बर २०१ 2019 मा भयो र long 45 डिग्री पश्चिम रेखांशमा अवस्थित थियो। यसले यूरोपको पश्‍चिमी तटहरू लाई प्रभावित मार्गमा देखायो जुन ब्रिटिश टापुको उत्तरी भागमा समाप्त भयो। यो देख्ने क्रममा यो एकदम आश्चर्यजनक तुफान हो कि यो संसारको यस भागमा यस्तो पहिलो घटना हो। हाम्रो रेकर्डहरू नभएसम्म यो सब भन्दा शक्तिशाली तूफान स्पेनको नजिक देखा पर्न सक्दछ।
यस कारणका लागि, हामी यस लेखलाई आँधी तूफान लोरेन्जोका सबै विशेषताहरूको सारांशमा समर्पण गर्न गइरहेका छौं र यदि हामी यसलाई फेरि हेर्नेछौं भने भविष्यमा यस्तो हुनेछ।
1 मौसम परिवर्तन र तूफान
2 तूफान लोरेन्जो विशेषताहरु
3 स्पेन को क्षेत्र मा तूफान लोरेन्जो
4 के यो फेरि हुनेछ?
मौसम परिवर्तन र तूफान
हामीलाई थाहा छ कि जलवायु परिवर्तनको नतीजा खडेरी र बाढी जस्ता चरम मौसम घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रतामा वृद्धि हो। यस केसमा, मुख्य रूपमा आँधीबेहरीको उत्पादनलाई असर गर्छ बढ्दो विश्वव्यापी औसत तापमान। यो ध्यानमा राख्नु पर्छ कि तुफानको गठनको गतिशीलता वायुमण्डलमा वाष्पीकरण हुने पानीको मात्रा र विभिन्न महासागरहरूको पानीको बिचको भिन्नतासँग सम्बन्धित छ। यसको मतलब यो छ कि जहाँ पानीको ठूलो मात्रा बाफ हुन्छ, तीव्र वर्षा हुन्छ किनकि यी सबै पानीहरू सd्कलनबाट बग्छन् र मुसलधारे वर्षा बादल बने।
विश्वव्यापी औसत तापमानको बृद्धि संग, हामी वायुमण्डलको गतिशीलता मा परिवर्तन गर्न जाँदैछन्। ठाउँहरू जहाँ यो पहिले चिसो थियो, तातो हुनेछ र, त्यसैले, हामी एक उच्च वाष्पीकरण दर हुनेछ। तूफान लोरेन्जो युरोपको लागि अघि बढे र पूर्वोत्तर सर्ने बित्तिकै यसले श्रेणी hur चक्रवात बन्ने शक्ति प्राप्त गर्‍यो। यो सफीर-सिम्पसन मापनमा सबैभन्दा उच्च श्रेणी हो। यसलाई २०० the मा न्यु अर्लिन्सको बीचमा बगाएको विनाशकारी तूफान क्याट्रिनासँग तुलना गरिएको थियो।.
तूफान लोरेन्जो विशेषताहरु
यो केवल तीव्रता को मामला मा तूफान क्याट्रिना संग तुलना गरिएको छैन, तर यो क्षेत्रमा जुन यो प्रहार मा पनि। एट्लान्टिकको यस क्षेत्रमा यो एकदम विशेष घटना पहिलो पटक हो जुन रेकर्ड गरिएको छ। संस्था र विज्ञहरूको सबै मापनका अनुसार तूफान लोरेन्जोको मार्गले महाद्वीपमा केही हदसम्म हल्का प्रभाव पार्‍यो र सबैभन्दा ठूलो समस्या एजोरसको हो। उहाँ यस क्षेत्रमा आउनुभयो १ 160० किमी / घण्टाको बतास र २०० भन्दा बढीको ग्यास, केहि बुँदाहरूमा। यो बेलायती टापुहरूमा पुगेको समयसम्ममा यो यति कमजोर भइसकेको थियो कि यसलाई आँधीबेहरीका रूपमा लिन मिल्दैन।
जब समुद्रमा आँधीबेहरी उत्पन्न हुन्छ, यो पानीमा खुवाउँछ जुन वाफ हुन्छ र समुद्री तटमा पुग्दा यसको अधिकतममा पुग्छ। जे होस्, एक पटक यो महाद्वीपमा प्रवेश गरेपछि, यो कमजोर हुँदै जान्छ र यसमा प्रवेश गर्ने बल गुमाउँछ। यसले आँधीबेहरीहरू अन्तर्देशीय इलाकाहरू भन्दा तटीय क्षेत्रमा बढी डराउँछ। थप क्षेत्र भित्रको क्षेत्र हो, यसलाई आँधीबेहरीबाट जोगाइन्छ।
स्पेन को क्षेत्र मा तूफान लोरेन्जो
हाम्रो जस्तो ठाउँमा तुफान देख्न धेरै विरलै छ। यस प्रकारको शंकालाई पहिलो उत्तर एकदम स्पष्ट छ। सब भन्दा अचम्मको कुरा यो आँधीबेहरीको प्रक्षेप र श्रेणी हो, तर आँधीबेहरी अफ्रिकामा आफ्नो गठन शुरू। यहाँ अव्यवस्थितताका तरंगहरू उत्पन्न हुन्छन् जुन अस्थिरताको कारण हुन्छ र त्यो तानिन्छ। जब यी अस्थिरताहरू क्यारिबियनको सबै भन्दा तल्लो समुद्रमा पुग्छन्, तिनीहरू क्लासिक र शक्तिशाली तूफान बन्छन् जुन हामीले प्राय: देख्छौं।
कुरा जुन यो समय क्यारेबियनमा पुगेको छैन तुफान गठन गर्न पर्याप्त पानी न्यानो सामना गरेको छ। पश्चिम जानुको सट्टा यो पूर्वतिर गयो। हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, आँधीबेहरी बनाउनको लागि, यसले केवल गुणस्तरयुक्त पानी लिन्छ जसले पानीको बाफको ठूलो मात्रामा विस्तृत बनाउँदछ, अन्तमा, उचाईमा क्षतिपूर्ति हुन्छ। यसरी नै तूफान बादल बनेको छ।
यो केवल 45 XNUMX डिग्री पश्चिमी देशान्तर तिर गएको हो तूफान लोरेन्जो गठनका लागि। यो सत्य हो कि एक अनौंठो प्रकोपको रूपमा हामी के गर्न प्रयोग गर्दै छौं, तर जबकि उत्तर जाँदा, कोटी taken लिइएको थियो। यस घटनाको सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यो एक अनौंठो प्रकोपमा गएको छ र, यो सामान्यतया कम तातो पानीको माध्यमबाट गए पनि, यसले तुफानको अधिकतम कोटिमा पुग्न पर्याप्त ऊर्जा लिन सकेको छ।
यिनै कारण हो कि तूफान लोरेन्जो हाम्रो समयको सबैभन्दा चर्चित आँधी हो। आँधीबेहरीको जन्मको लागि हामी यो देख्छौं कि यो मौसम परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ जुन हामीले अगाडि उल्लेख गरिसक्यौं। यो सत्य हो कि यसमा5को श्रेणीमा पुग्न सक्षम हुन सामान्य भन्दा तातो पानी भेट्नुपर्दछ, तर जे भए पनि यस प्रकारको तूफानको अस्तित्व प्रत्यक्ष रूपमा मौसम परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन सक्दैन। हामीलाई केहि निश्चित गर्न सक्षम हुन हामीलाई धेरै एट्रिब्युसन अध्ययनहरू र यस्तै समान केसहरू आवश्यक पर्दछ। यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि मौसम परिवर्तनले दीर्घकालीन असरहरू गरिरहेको छ र जलवायु परिवर्तनको असरलाई तूफान लोरेन्जोको गठनसँग जोड्न सक्ने पर्याप्त प्रमाण छैन।
के यो फेरि हुनेछ?
धेरै व्यक्तिहरूको शंका यो हो कि यदि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा फेरि यस श्रेणीको आँधी देख्दछौं। स्पेनको मौसम विज्ञान बताउँछ कि मौसम परिवर्तनको साथ हामीले कुनै पनि प्रकारको ढाँचा छ वा आँधीबेहरीको व्यवहारमा परिवर्तनहरू छन् कि छैन भनेर जान्न विभिन्न अध्ययन र त्यस्तै घटनाहरू हुनु आवश्यक छ। अध्ययनमा एउटा जिज्ञासाको उल्लेख गरिएको छ र यो हो, हामीले यस्तै प्रकारको आँधीबेहरी आउँदो वर्षहरूमा यस ढाँचाको बारेमा कुरा गर्न सक्षम हुन आउँछ कि भनेर हेर्नुपर्दछ। एक बर्ष अघि हामीले लेस्लीलाई लोरन्जोसँग यस्तै व्यवहार गर्‍यौं। यो संग, तूफान गठनको ढाँचामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको बारेमा शंका छ.
तूफान लेस्लीले हाम्रो देशलाई असर गर्यो र १ber1842२ पछि इबेरियाई प्रायद्वीपमा पुग्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली चक्रवात थियो। यो समयको सबैभन्दा लामो चल्ने अटलांटिक तूफान मध्ये एक पनि मानिन्थ्यो। योसँग एकदमै अनौंठो व्यवहार पनि थियो किनकि यसले यसको पथमा लगातार परिवर्तनहरू गर्‍यो। यो कारणले गर्दा विशेषज्ञहरु राम्रो पाठ्यक्रम प्लट गर्न सकेन।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं तूफान लोरेन्जो र यसको विशेषताहरूको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम घटनाहरू » तूफान » तूफान लोरेन्जो
ग्लोबल वार्मिंगका कारणहरू